Home Horyaalka Spain Ilaix Moriba Waligeey ma ilaabo doono goolkeyga iigu horeeyey ee barcelona
Shaqo fiican ayeey qabanayaan da ‘yarta kooxda barcelona taas oo ka saaciday in barcelona guul ay ka gaartay Osasuna waxaana ay ku dhawaadeen hogaamiyaasha horyaalka ee Atletico madrid.
Ilaix Moriba wuxuu sheegay inuusan waligiis ilaawi doonin goolkiisii ugu horreeyay ee Barcelona isla markaana uu xasuusan doono ilaa uu ka dhinto ka dib uu gool ka mid ah dhaliyey labdii gool ay kaga badiyeen Osasuna Sabtidii.
18-jirkan ayaa aruuriyay baaskii uu ka helay Lionel Messi ka hor inta uusan cagtiisa bidix ka jarin isla markaana uu dadaal cajiib ah ku galay geeska kore, isagoo laba jibaaray faa’iidada Barca ka dib qeybtii hore ee Jordi Alba uu dhaliyey goolka hore.
Guushaan ayaa u horseeday kooxda Ronald Koeman labo dhibcood oo ay ku hogaaminayaan Atletico Madrid, kuwaasoo caawa la ciyaari doona kooxda ay xafiiltamaan ee Real madird.
Moriba ayaa saftay kulankiisii ugu horeysay ee bishii Janaayo ee uu ka horyimid Cornella ee Copa del Rey, laakiin wuxuu ka yaabiyay Koeman inuu ku sii nagaado kooxda koowaad.
Waxa uu saftay kulankiisii ugu horeysay ee La Liga ee Alaves bilowgii bisha, iyadoo kulanka sabtida uu ka horyimid Osasuna kaliya kulankiisii shanaad ee ugu sareeyay.
“Leo wuxuu i siiyay baas fiican mana aqaan sida aan u gooyay oo aan ugu toogtay dhanka bidix, waana ku mahadsan yahay Ilaah inuu galay,” ayuu u sheegay Barca TV .
Waligey ma ilaawi doono tan waxaanan u geyn doonaa qabrigayga. Waxaa jira tartan loogu talagalay meelaha laakiin macno malahan haddii aad yar tahay iyo haddii kale. Haddii aad si fiican u ciyaarto waxaad ku jirtaa kooxda.
Ciyaartoyda waa weyn ayaa na caawiya, talo na siiya, Leo wuxuu ii sheegayaa inaan tago aagga inta ugu badan ee aan kari karo oo aan boos ka helo toogashada.
Waxaan rabaa inaan u hibeeyo hadafkan aabahay iyo La Masia, halkaas oo aan waxbadan ka bartay.”
Moriba ayaa sidoo kale ku adkeystay in Barcelona aysan ka tanaasulin hanashada horyaalka, in kasta oo hogaamiyaasha Atletico ay gacanta ku hayaan labo kulan.
“La Liga ma ahan anaga,” ayuu raaciyay ciyaaryahanka qadka dhexe, kaasoo 18 sano iyo 46 maalmood ah ciyaaryahanka ugu da’da yar ee ka dhaliya banaanka diilinta ganaaxa La Liga xilli ciyaareedkan. Waan dagaalami doonnaa ilaa dhamaadka. Taasi waa DNA-da ay na bartay La Masia.”
Previous articleTimothy Weah oo shaaca ka qaaday inuu ku dhawaaday inuu kubiiro midowga Philadelphia Union.
Next articleReal madrid oo soo xulatay safka ay kaga hortegeyso Athletico madird.